Miyey Lyon iyo PSG sii ciyaari doonaan Champions League iyadoo horyaalka Faransiiska la kansalay? – Gool FM
Miyey Lyon iyo PSG sii ciyaari doonaan Champions League iyadoo horyaalka Faransiiska la kansalay?
Haaruun April 30, 2020
(Paris) 30 Abril 2020. Dowladda Faransiiska ayaa guud ahaan soo af jartay horyaalka Ligue 1 kaddib markii ay joojiyeen dhammaan dhacdooyinkii ciyaaraha ee dalkaas illaa laga gaaro bisha September.
Taasi waxay keentay is weydiin ah in kooxaha reer France ay sii ciyaari doonaan tartamada Yuru, balse Armand Duka oo xubin ka ah guddiga tartamada ee UEFA ayaa caddeeyay in kooxaha Paris Saint-Germain iyo Lyon ay sii ciyaari doonaan tartanka Champions League.
Ninka reer Albania ayaa qeexay in UEFA ay tahay awoodda kaliya oo go’aamin karta in labada kooxood ee Faransiiska ah ay sii ciyaaraan tartanka horyaallada Yurub ee xagaaga la rajeynayo in la dhammeystiro.
“Hadafka ah dhammeystirka horyaallada, ugu yaraan UEFA ayaa bixin karta tilmaam ah in la dhammeeyo horyaallada Yurub,” ayuu Duka u sheegay Radio Kiss Kiss.
Balse waxa uu qiray in wax walba ay ku xiran yihiin xaaladda dal walba, iyo sida dowladdiisa ay maareyso xaaladda faafaha coronavirus.
“Qaarkood horraan ayay go’aansadeen inay xiraan horyaalladooda, balse UEFA ayaa leh go’aanka kooxahooda ay ku ciyaarayaan koobabka Yurub” ayuu hadalkiisa ku daray.
“Xiriirka Faransiiska waxay go’aamiyeen horyaalka, balse ma go’aamin karaan tartanka Yurub” ayuu Duka hadalkiisa ku soo xiray.
PSG ayaa horraan u soo gudubtay wareegga rubac-dhammaadka ee Champions League kaddib markii ay ka tallaabsatay Borussia Dortmund, halka Lyon ay lugtii hore ee wareegga 16-ka 1-0 kaga adkaatay Juventus, iyadoo lugta labaad ay harsan tahay wali in lagu ciyaaro magaalada Turin ee dalka Talyaaniga.
Manchester United oo u sheegtay Jadon Sancho lambarka uu xiran doono haddii uu kooxda ku soo biiro xagaagan
Xiriirka kubadda cagta Faransiiska oo go’aan cad ka qaatay in horyaalka PSG la siin doono ama in la dhaafin doono